Guddoonka Aqalka Sare oo shaaciyay xiliga uu furmayo Kalfadhiga 5aad – Kalfadhi
Guddoonka Aqalka Sare oo shaaciyay xiliga uu furmayo Kalfadhiga 5aad
Waxaa galabta soo gaba-gaboobay kulan manta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen Guddiga joogtada ah Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaalya, waxaana shir guddoomiyay Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/llaahi.
Kulankaan ayaa looga tashaday furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Aqalka Sare, Iclaaminta waqtiga uu furmayo kalfadhiga iyo ansixinta qorsho howleedka Kalfadhiga 5aad iyo qodobo kale.
Markii uu kulanka soo dhamaday ayaa warbaahinta waxaa la hadlay hab-dhowraha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Senator Cabdi Kaafi Macalim Xasan waxa uuna aqriyay qoraal ka soo baxay Aqalka Sare.
“Ka tashiga furitaanka kalfadhiga 5aad ee Aqalka Sare, Iclaaminta waqtiga uu furmayo Kalfadhiga iyo ansixinta qorsho howleedka Kalfadhiga 5aad ayaa looga hdlay”, ayuu yiri hab-dhowraha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Senator Cabdi Kaafi Macalim Xasan.
“Sabtida oo ku beegan 16ka bishaan ayuu furmaya Kalfadhiga 5aad ee Aqalka Sare”, ayuu yiri Senator Cabdi Kaafi Macalim Xasan. “howlo badan ayaa na horyaalo, qorshuhu waa badan yahay”, ayuu hadalkiisa raaciyay hab-dhowraha Aqalka Sare ee BFS.
Aqalka Sare sooma hadal qaadin khilaafka u dhaxeeyo labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya balse waxay sheegayn in ay shaqo badan ay hortaalo Aqalka Sare kalfadhigaan furmaya 16-ka bishaan.
Maxay qabteen golaha wakiillada cusub ee Puntland mudadii kalfadhiga 43aad?
Xildhibaan ka digay in Mushaar la’aan Ciidamada uga soo baxaan furumaha dagaalka.